Home Wararka Gud/ ku xigeen degamada Wanlaweyn oo ka badbaaday qarax lagu dili rabay
Gud/ ku xigeen degamada Wanlaweyn oo ka badbaaday qarax lagu dili rabay
Wararka ka imaanaya degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xalay fiidkii halkaasi uu ka dhacay qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso lagana hago meelaha fog fog. Qaraxan ayaa ka dhacay banaanka hore ee guriga uu Wanlaweyn ka degan yahay Guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda Wanlaweyn Cabdullaahi Cabdulle Xasan (Gaduudow) , qaraxa ayaana dhacay xilli Gaduudow gurigiisa sii galayay.
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa ku dhintay wiil uu dhalay Guddoomiye kuxigeenka Wanlaweyn Cabdullaahi Gaduudow, waxaana qaraxa dhaawac fudud kasoo gaaray guddomiye kuxigeenka iyo mid kamid ah ilaaladiisa.
Ciidamada ammaanka ayaa qaraxa kaddib sameeyay baaritaano lagu baadigoobayay ragii qaraxa ka dambeeyay, lamana soo sheegay cid loo qabtay qaraxaasi uu ka badbaaday guddoomiye kuxigeenka Wanlaweyn.
Previous articleDalka Jabuuti oo hoos u dhigtay xiriirka diblomaasiyadeed ay la lahayd Somaliland! Sabab?
Next articleHowlgalada cusub iyo dib u habeynta AMISOM oo maanta la filayo in la ansaxiyo
Taiwan oo dowlada Somaliland ka caawineysa wax soo saarka beeraha